Ndị kasị mma Lakes Na Northern Italy | Save A Train
Home > Inzọ Njem Italytali > Ndị kasị mma Lakes Na Northern Italy
Ndị kasị mma Lakes Na Northern Italy
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 06/02/2021)
Na ụfọdụ nke Europe kasị ụgbọ oloko na ọtụtụ sinik ụzọ gasị, Ejegharị ejegharị ihe ndị kasị mma Lakes na Northern Italy ụgbọ okporo ígwè bụ echekwa, ala, ma duzie, àjà ihe ghọta obodo ndụ, mgbe mgbe na oké echiche ẹsịn bargain.
Na a bit nke savvy uzo-atụmatụ na a na-agbanwe oge, ị pụrụ nnọọ mfe Ibe ọnụ ihe njegasi ga-eme ka njem dị nnọọ ka nnukwu dị ka ebe.
Eleta Northern Italy
Dị ka ọtụtụ mba, Italy nwere ya North-South ike na Northern Ịtali na-etu ọnụ na ha na-etolite na obodo akụ na ụba idé na ulo oru powerhouse.
Site eyewear ka ejiji nri, Italy ugwu na mpaghara na akaụntụ maka n'elu 50% nke Italian aku na uba ... n'agbanyeghị nwere ihe na-erughị ọkara nke mba ndị bi!
The 8 n'ógbè ndị:
Ekele abụọ ugwu, ise freshwater ọdọ mmiri, Rolling ugwu nta, na-ekwo ekwo seaports, e nwere nza nke di iche iche na North Italy, ọbụna obere anya. Can nwere ike ibido izu gị gbasara skai na Dolomites, laze banyere na Lake Como na-akwụsị njem eri oriri na Erimeri na Cinque Terre!
Ndị na-ahọrọ ejiji na nri ga-emechu ihu ma. Red-akịrịka obodo ndị dị ka Bologna na-ịhụnanya atụle Italy obodo nke gastronomic indulgence mgbe Parma mpụga bụ ụwa-klas emepụta nke prosciutto na Parmesan.
mgbe, n'ezie, e nwere obodo abụọ a ma ama na Milan na Venice na-achọpụta na North nke Italy! Atụkwasị m obi mgbe m na-ekwu, ọ bụla esenowo ga-ahụ ihe ka n'anya ebe a.
N'ihi na ọtụtụ mgbanwe, ị kwesịrị ịgbazite ụgbọ ala mgbe ejegharị ejegharị na-ahụ dị iche iche na Lakes na Northern Italy. Ọ bụrụ na ị chọrọ na-adabere na ọha njem, ọ bụ maa doable.
Lakes na Northern Italy – Lake Como
Kwuo Lake Como onye ọ bụla na Ohere inweta bụ, anya ha ga-amụnye ha ga-asị "George Chukwu!"
Lake Como, makwaara dị ka Lario, bụ ọdọ mmiri nke atọ kachasị ukwuu na Northern Italy, na a kacha omimi nke ihe 410 mita (448 yaadị), bụ otu n'ime ndị kasị mie emie na ọdọ mmiri na Europe.
Fast Eziokwu: Ị maara, ya udi njirimara, reminiscent nke ihe abịazi nọdụ Y, arụpụta-agbaze nke kpụkọrọ jikọtara na erosive edinam nke oge ochie Adda osimiri. Nke a mere ka e guzobe nke abụọ n'ebe ndịda alaka, n'etiti bụ nke ụwa na-ewu ewu Bellagio.
Odude na ụkwụ nke Alps, Lake Como na-enye otu n'ime ihe ndị kasị ọmarịcha censorious na ụwa. Ọ bụrụ na ị na-aga ileta Italian ọdọ mmiri, ị ga-anya ịmụta banyere ọtụtụ ihe ime na Lake Como e wezụga celebrity spotting!
M na a ụgbọ mmiri!
E wezụga eziokwu na na-na Northern Italy site Train bụ a dịghị-brainer, anyị ga-ekweta hitching a na-agba ịnyịnya na a ụgbọ mmiri bụ mara mma oke. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị chọrọ ahụmahụ Lake Como akpan akpan na ya kacha mma.
Ma ị na eleta Lake Como maka a ụbọchị ma ọ bụ na-anọ ogologo, awụlikwa elu banyere n'ụgbọ mmiri, zuru ike na iru ọkacha mmasị gị obodo: Bellagio, Varenna, dị ka, ma ọ bụ ma eleghị anya, otu n'ime akụkọ ihe mere eme Villas dị n'ikperé ọdọ.
Milan ka Lake Como Ụgbọ oloko
Turin ka Lake Como Ụgbọ oloko
Padua ka Lake Como Ụgbọ oloko
Venice na Lake Como Ụgbọ oloko
Lake Garda bụ otu n'ime ndị kasị ibu Lakes na Northern Italy na kasị na ice ọdọ Italy ise ọdọ mmiri, nri site na Alps na n'ebe ugwu. North of Verona, Lake Garda bụ ihe kasị ezinụlọ – na mmiri sports-edebere nke Italy ọdọ mmiri. Ọ bụkwa Italy kasị ọdọ, eru si nkpoda Alpine foothills ka ugwu ihu Po Valley.
Ndịda n'ikpere mmiri na-agbakọta site osimiri na kụziri site na ala ugwu nta. Mgbe ke n'ebe ugwu, ugwu na n'oké ọnụ ọnụ ugwu ọnụ ọnụ ọdọ, karịsịa tinyere n'ebe ọdịda anyanwụ n'ụsọ. Ya teren enye ọdọ a iche iche nke na-adọrọ maka egwuregwu n'anya njem nleta. Si otu ebe ifufe rụnyere na windsurfing ka ugwu maka rịa, rappelling, na ugwu biking, niile na ọdọ echiche.
Ozi ka mma ọbụna. Lake Garda ebe na-enye ya a isua gburugburu ọnọdụ ihu igwe ebe mkpụrụ oliv na lemons na-eto eto nke ọma n'ebe ugwu nke ha na mbụ nso. Zuru okè n'ihi na n'ehihie ụfọdụ G&T! Tinye ogologo aja osimiri na a ipigide obodo na Lakeside promenades echiche. I wee onwe gị zuru okè ezumike ebe!
Ya mere, olee ihe ị na-eche dị eme na-aga ịhụ ụfọdụ Lakes na Northern Italy? Chọrọ ịzọpụta oge na ego mgbe Ejegharị ejegharị na-Northern Italy site Train? AKWỤKWỌ gị niile gbaa ụgbọ okporo ígwè iji Save A Train na nkeji, na-enweghị zoro ezo ụgwọ!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/beautiful-lakes-northern-italy/- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / ja na / ma ọ bụ na / tr na ndị ọzọ asụsụ.
#lago #ọdọ #LakeComo #LakeGarda #NorthItalyTravel northitaly NorthItalylakes
5 Kasị Mma Obodo Ochie Centres Na Europe
Train Travel Austria, Ingbọ oloko na Belgium, Train Travel Czech Republic, Train Travel France, Inzọ Njem Italytali, Travel Europe
Njem si Rome gaa na Paris Site na Zụọnụ Elu
Train Travel France, Inzọ Njem Italytali, Zụọnụ Ndụmọdụ
The kasị dị ịrịba ama Universities Na Europe
Train Travel Denmark, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Travel Europe
10 Ezumike Ezinụlọ Na Europe
10 Ndụmọdụ Otu esi ehi ụra na ụgbọ oloko
7 Best glamping Places Na Europe
10 Obodo Kachasị Mma Obodo Ochie Iji Gaa leta Worldwide
10 Ahịa ahia kacha mma gburugburu ụwa